Umntwana wam ulele esibhedlele ndingakunceda ngantoni? | Oomama Namhlanje
Umntwana wam ulele esibhedlele ndingakunceda ngantoni?
UAlicia tomero | 13/05/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 15/05/2021 14:33 | Iingcebiso, Intsapho
Akululanga ukuya kwimeko apho Unyana wakho ulele esibhedlele kwaye kuncinci kuye xa bengazinzanga abantwana, befuna ukuhlala kwaye kufuneka badlule kukhathalelo olugqithisileyo. Kwakhona, la ngamaxesha xa iindlela zophukile yimalini xa uza kuchitha ixesha elide esibhedlele. Kungenxa yoko le nto kufuneka sijonge uqeqesho kunye nezicwangciso zokuqhuba kangangoko.
Ngaphambi kwayo yonke inkwenkwe okanye intombazana kufuneka Yambathani ngamaxesha onke, njengoko uya kuziva usoyika kwaye ungenakuzinceda. Kuya kufuneka uluve uthando, ukhuseleko kwaye ungayikhathaleli intuthuzelo yakho kwaye waziswe ngemeko yakho ukuyiguqula kubudala bakho.
1 Ndingamnceda njani umntwana wam esibhedlele?
2 Abazali kufuneka babonise amandla abo
Ndingamnceda njani umntwana wam esibhedlele?
Ukuqwalaselwa kwakhe kuya kukhokelela kwiingcali ezininzi ukuphumeza izifo abanye abantwana ekufuneka bezithathe ezibhedlele. Kuya kufuneka uye kulo naluphi na uluvo olunokukunikwa ziingcali kwaye uzisebenzise impilo yengqondo yomntwana.
Kukho oko vumela abantwana bavakalise uloyiko lwabo, ukuba bafuna ukulila kufuneka ubavumele ukuba bayibonakalise. Kodwa ngaphezulu kwayo yonke inkxalabo yakhe enkulu kufuneka igutyungelwe Ukuphazamiseka kwaye oko kuyenziwa ngemidlalo. Mmeme ukuba adlale ngayo nayiphi na into anokuyenza ngaphakathi kwamandla akhe: imidlalo emincinci yokwakha, ukuzoba ngeepeyinti ezintsha, iiphazili, iithoyi ezincinane, njl.
Ukufunda kunokuba mnandi kwaye kwangaxeshanye unenzuzo, unokukhetha phakathi kweencwadi zobudala bakhe, iimagazini okanye umfundele amabali. Ukuba nomabonwakude egumbini kuya kukuphazamisa ngomboniso owuthandayo, uxwebhu okanye uthotho.
Ukuze ukwazi ukudibanisa uxinzelelo ngakumbi kwaye ube nomonde ngakumbi, unako yenza ishedyuli yemihla ngemihla yemisebenzi. Ngale ndlela unokucwangcisa yonke imisebenzi yosuku ukuba ube nokukhuseleka ngakumbi xa usenza izinto kwaye ke umntwana uya kuba nesiqhelo.
Ukwenza olu hlobo lwesiqhelo kulula ukucinga ukuba siza kuchitha ixesha elininzi kangangoko sinakho nomntwana osegumbini kwaye kuyafuneka ukuba sicwangcise amaxesha aliqela azonwabisa kwaye anyamezeleke. Kuqhelekile nokuba unendawo yokulala ecaleni kwebhedi yomntwana, njengoko iya kuba yeyona nto uyifunayo ebusuku.
Amalungelo abaguli esibhedlele nabantwana, ngexesha lokuvalelwa
Ingaba yenza izipho ezitsha kunye nezipho ngeyona mihla imbi kwaye uphakamise umoya wakho, kodwa ngokuqinisekileyo ezinye izinto okanye izinto zokudlala ezilinde ekhaya kwaye ezinokusiwa esibhedlele ukuthoba uxinzelelo ziya kukuthuthuzela ngakumbi.
Kubalulekile cela ukuthatha inxaxheba okanye uncedo kulo naluphi na unyango ukuba iyenziwa, ngenxa yoku siza kucela iingcali. Siyakholelwa ukuba ukucela uncedo akufuneki kube yingxaki kwaye ingcali inokuvavanya imeko.
Kuya kuba mnandi kakhulu ukuba naye Ndwendwela ilungu losapho elisondeleyo okanye umhlobo, iyakonwabisa. Unokude uthethe nabo emnxebeni okanye ubhalele iileta okanye uthumele imiyalezo. Kwaye ngaphezu kwako konke ukungamvumeli ukuba aswele uthando, Kufuneka ube secaleni kwakhe uze umchukumise, umphulule, umbambe ngesandla. Ukuba isibhedlele okanye oogqirha bayakuvumela oko, ungabuza ukuba bayakuvumela na ukuba uze Ukutya endikuthanda kakhulu.
Abazali kufuneka babonise amandla abo
Kubalulekile ukuba abazali babonise amandla, bonisa ingqalelo kunye neemvakalelo zakho ngendlela eyakhayo. Kunzima ukulandela le modeli yesimo kwiimeko apho umntwana anokuba nesifo esibi, kodwa ukunceda umntwana omncinci kufuneka yeka ukukhala kunye neenkqubo zoxinzelelo ezibuhlungu. Ukuba awukwazi ukuyilawula kuya kufuneka cela lonke uncedo lwengqondo ukuze ungangeni kweso simo sengqondo sokubola, kodwa endaweni yoko kugcinwe ukuqina. Umntwana obabona abazali abomeleleyo ubakhuthaza ukuba bakwazi ukohlula inkqubo kunye nalo naluphi na ungenelelo ngcono.
Into ebaluleke kakhulu kukunika olo khuthazo kubantwana abaludinga kakhulu. Ukuba uye wenziwa utyando, ngabazali ngabo Kuya kufuneka alondoloze uxolo kunye nokuzola kwaye uyihambise ngalo lonke ixesha. Kuya kufuneka ubhetyebhetye kwaye ubabuze babuze imibuzo, bayeke bakhuphe, basuse uloyiko lwabo kwaye bagqithise izinto ezibaxhalabisayo. Abazali banokunxibelelana namanye amatyala okanye iingcali ezifanayo ukuze bafumane indlela yokoyisa la maxesha oxinzelelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Umntwana wam ulele esibhedlele ndingakunceda ngantoni?
Unyana wam uxelisa abanye abantwana
Ubuntwana kunye nefibriomalgia yentsha: indlela yokuyinyanga